အဟား…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အဟား….
Posted by Yin Nyine Nway on Aug 22, 2010 in Aha! Jokes, Satire |0comments
၁) ရာဇသတ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေသစ်
– ပိုးပန်းသူများသော အမျိုးသမီးမှန်သမျှ မိမိနှစ်သက်ရာ တစ်ယောက်ကိုရွေးယူပြီး ကျန်ယောက်ျားများကို လိုအပ်နေသူများအား လွှဲပြောင်းပေးရမည်။
– မျက်နှာအလှပြင်ဆေးအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုသူ အမျိုးသမီးများအား သက်သေအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းတို့ကို အတုလုပ်သူအဖြစ် အရေးယူနိုင်သည်။
– ယောက်ျားတို့ကို ဂရုမစိုက်သော အမျိုးသမီးများအား ဒုက္ခရောက်နေသူကို လျစ်လျူရူမှုဖြင့် အရေးယူရမည်။
– မိမိ၏ချစ်သူကို တစ်ခါမျှမနမ်းဖူးသေးသော လူငယ်တို့ကို အလုပ်တာဝန် လစ်ဟင်းမှုဖြင့် အရေးယူရမည်။
– မိမိချစ်နေသူကို ချစ်ကြောင်းဖွင့်ပြောရန် မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေသူလူငယ်တို့ကို စစ်မြေပြင်မှ ထွက်ပြေးသူအဖြစ် ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးရမည်။
– လမ်းပေါ်တွင် ဖက်ရမ်းနမ်းရူပ်နေသော စုံတွဲတို့ကို လမ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် အရေးယူမည်။
– ကလေးမရှိသော လင်မယားတို့ကို အလုပ်တာဝန် ပေါ့လျော့မှုဖြင့် အရေးယူရမည်။
– ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ကြိုက်ချင်ယောင်ဆောင်သော မိန်းမတို့ကို တစ်ဖက်လူကို နာကျင်စေမှုဖြင့် အရေးယူရမည်။
– သူတစ်ပါး၏မယားနှင့် တိတ်တဆိတ် ပေါင်းသင်းနေထိုင်သူကို ပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ပစ္စည်းခိုးယူသုံးစွဲမှုဖြင့် အရေးယူရမည်။
– သူတစ်ပါး၏ ယောက်ျားနှင့် ပေါင်းသင်းနေထိုင်သူ အမျိုးသမီးကို မီတာဘောက်စ်မထားပဲ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို သုံးစွဲမှုဖြင့် အရေးယူရမည်။
– မိန်းကလေးတစ်ယောက်အား မင်္ဂလာမဆောင်ပဲ အတူနေထိုင်သူယောက်ျားကို ပါမစ်မလျှောက်ပဲ ရေနံတွင်းတူးမှုနှင့် အရေးယူရမည်။
– မိမိ၏ မိခင်အိမ်တွင် မယားဖြစ်သူကို အတင်းနေခိုင်းသူအား လူကောင်းကို အရူးထောင်ပို့သူအဖြစ် အရေးယူရမည်။
– အသက် ၂၅-နှစ်အရွယ်ထိ အိမ်ထောင်မပြုသေးသော ယောက်ျားတို့ကို အလုပ်ချိန်အတွင်း စက်ကိုရပ်ထားသူအဖြစ် အရေးယူရမည်။
– ရည်းစားများများထားသော အမျိုးသမီးကို နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းအား ခိုးယူမှုဖြင့် အရေးယူရမည်။
– အသက် ၂၅-နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်သော်လည်း တစ်ခါမှ အိမ်ထောင်မပြုသေးသော အမျိုးသမီးကို အဖျက်သမားအဖြစ် အရေးယူမည်။
ဝန်ကြီးများရုံးသို့ လူငယ်တစ်ဦး အလုပ်လာလျှောက်သည်။ အိမ်သာသန့်ရှင်းရေးလုပ်သားနေရာ
သာ လစ်လပ်နေသည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်လိုက လုပ်နိုင်ကြောင်းလူငယ်အား ပြောသည်။ လူငယ်က သဘောတူလိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရင်း သီချင်းနားထောင်နိုင်ရန် အိမ်သာထဲတွင် ကက်ဆက်တစ်ခုထည့်ထားလိုက်သည်။
ဝန်ကြီးရုံးသို့ ဝန်ကြီးတစ်ဦးရောက်လာပြီး အိမ်သာဘယ်မှာလဲဟု လူငယ်အားမေးရာ လူငယ်က ဝန်ကြီးကို အိမ်သာသို့ လိုက်ပို့ပေးသည်။ အိမ်သာခန်းထဲသို့ ဝန်ကြီးဝင်သွားသောအခါ ကတ်ဆက်ကို လူငယ်ဖွင့်လိုက်သည်။ မြန်မာပြည်သိန်းတန်၏ “ရိုင်းတဲ့စင်ယော်´´သီချင်းသံ ငြိမ့်ညောင်းစွာ ပေါ်ထွက်လာသည်။ မကြာမီ အိမ်သာခန်းထဲမှ စောစောကဝန်ကြီးထွက်လာသည်။
“မောင်ရင် ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ ကြာပလား´´
မကြာမီ နောက်အရာရှိကြီးတစ်ဦး ရောက်လာသည်၊ အိမ်သာခန်းထဲ အရာရှိကြီးရှိနေစဉ် တွံတေးသိန်းတံ၏ “အသီးတစ်ရာ အညှာတစ်ခု´´ သီချင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအရာရှိလဲ စိတ်ကျေနပ်မှုရကာရာထူးတိုးအောင် ထောက်ခံပေးမည်ဟု လူငယ်ကို ကတိပြုသွားသည်။
နောက်တစ်ခါ ရောက်လာသူကား မြန်မာပြည်၏ ယခုလက်ရှိခေါင်းဆောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။
လူငယ်ကခေါင်းဆောင်ကြီးကို လိုက်ပို့သည်၊ ထို့နောက် “နိုင်ငံတော်သီချင်း´´(ကမ္ဘာမကြေ) သီချင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
အတန်ကြာသောအခါ အိမ်သာခန်းထဲမှ မျက်ထောက်ကြီးနီပြီး ခေါင်းဆောင်ကြီးထွက်လာသည်။
“အေး- ပထမနေ့နဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပဲ မှတ်လိုက်ပေတော့´´
“ဘာဖြစလို့လဲခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော်ဘာများမှားတာလုပ်မိပါလို့လဲ ခင်ဗျာ´´
“ငါ့တစ်သက်မှာ ဒီတစ်ခါပဲ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျင်ကြီးစွန့်ရလို့ဟေ့´´
အဝေးပြေးမီးရထားပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်တွဲအိပ်ခန်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ အတူတူကျသည်။ ညည့်နက်သည်အထိ နှစ်ယောက်လုံး ဟိုလှိမ့်ဒီလှိမ့်နှင့် အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေကြသည်။
“အိမ်မှာ သစ္စာမဲ့တဲ့ယောက်ျားကျန်ခဲ့တာကို သတိရလို့´´
“ကျုပ်လဲဒီအတိုင်းပဲ၊ အိမ်မှာဖောက်ပြားတဲ့မိန်းမ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ကလဲ့စားချေလိုက်ကြရင် မကောင်းဘူးလား´´
ကလဲ့စားချေလိုက်ကြသည်။ အမျိုးသားသည် မိမိအိပ်ယာဘက်ပြောင်းကာ အနားယူသည်။ မျက်လုံးများလေးလာကာ အိပ်စပြုသည်။ အမျိုးသမီးကမူ မအိပ်နိုင်ပဲ ယခင်အတိုင်း ဟိုလှိမ့်ဒီလှိမ့် လုပ်နေသည်။
“ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျား မအိပ်တာလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ကလဲ့စားချေပြီးကြပြီပဲ´´
“ကျွန်မက တစ်ခါပြီးတစ်ခါ ကလဲ့စားချေချင်တယ်ရှင့်´´
“ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး၊ စိတ်ဆိုးရင်ခဏပဲ´´
“ဟေ … မင်းရူးနေသလားကွ´´
“ဘာလဲ၊ ဒါ မုချရှိရမယ့် အရည်အချင်းလားခင်ဗျာ´´
“ဘာအရည်အချင်းမှမရှိပဲ ထိုင်ခုံပေါ်တက်ထိုင်နေတယ်၊ ထိုင်နေတာလဲ ဘယ်လောက်တောင်ကြာနေပြီလဲ။ အလကားလူ၊ ကိုယ့်ဘာသာဘာကိုမှလဲ မဆုံးဖြတ်ဘူး။ နောက်လိုက်တွေရှိနေပြီး နောက်လိုက်ကောင်တွေကလဲ အလကားကောင်တွေပဲ´´
ထိုစဉ် အဆိုပါအဘိုးကြီးနား မာဖီ(အရပ်ဝတ်ဖြင့်) ရဲသားနှစ်ဦးကပ်လာပြီး အဘိုးကြီးကိုမေးသည်။
မကြာမီ ခုနကအဘိုးကြီး ကမျောကသောဖြင့် ရဲနှစ်ဦးနောက်သို့လိုက်လာပြီး အမောတကောမေးသည်။
လူသတ်မှုတရားခံကို တရားသူကြီးက မေးသည်။
“ခင်ဗျား၊ ဘယ်လိုသတ်သလဲဆိုတာကို ရုံးတော်ကို ရှင်းပြပါ´´
“ဒီလိုပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော်ဟာ မီးယပ်နဲ့သားဖွားဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်၊ တစ်နေ့တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့်ဆီကို အမျိုးသမီးလူနာ လေးဆယ်လာပြလေ့ရှိပါတယ်´´
“အဲ့ဒါဘာဖြစ်သလဲ၊ ခင်ဗျား ဘယ်လိုသတ်သလဲဆိုတာပြောပါ´´
“ကျွန်တော်ရှင်းပြနေပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဟာ မီးယပ်နဲ့သားဖွား ပြောရရင်တော့ မိန်းမရောဂါတွေကုသတဲ့ဆရာဝန်၊ တစ်နေ့မှာ လူနာလေးဆယ်လာတယ်။ ဒီကြားထဲ နောက်ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ခွင့်သွားနေတော့ ကျွန်တော့်ဆီကို အမျိုးသမီးလူနာ တစ်နေ့ကို ရှစ်ဆယ်လာပါတယ်´´
“ဟုတ်ပြီလေ၊ ကျုပ်တို့သိချင်တာက သေသူကိုခင်ဗျား ဘယ်လိုသတ်လိုက်သလဲဆိုတာကိုပဲ´´
“ကျွန်တော်ဟာ မီးယပ်နဲ့ သားဖွားဆရာဝန် တစ်နေ့ကို လူနာရှစ်ဆယ်လာတယ်၊ တစ်နေ့မှာ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာ စောင့်နေရင်း အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက် ကျွန်တော့်အနားကပ်လာပြီး၊ `ဦးလေး ကျွန်မကို တစ်ထောင်ပေးပါ၊ အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့အတွက် ဦးကိုကျွန်မ တစ်စုံတခုပြမယ်´ လို့ပြောတယ်ဗျာ စဉ်းစားစာကြည့်ကြပေတော့´´
တာဝန်ရှိအရာရှိတစ်ဦးမှ မီဒီယာများအား ငါးနှစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေကို ရှင်းပြနေသည်။
“ငါးနှစ်စီမံကိန်းမှာ လျာထားတဲ့အတိုင်း (—– )မြို့မှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားပြီ´´
စာနယ်ဇင်းထဲမှ တစ်ယောက်က ထပြောသည်။
“အဲ့ဒီမြို့ကနေ မနေ့ကပဲ ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တယ်၊ ဘာဓါတ်အားပေးစက်ရုံမှမရှိဘူး´´
“(—–)မြို့မှာ ဓါတ်မြေဩဇာ စက်ရုံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်´´
“မကြာမီက အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်ခဲ့သားပဲ၊ စက်ရုံနဲ့တူတာတောင် မတွေ့ခဲ့ပါဘူး´´
“ဒီမယ် ခင်ဗျား ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားနေမယ့်အစား သတင်းစာများများဖတ်သင့်တယ်´´
ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြို့နယ်တစ်ခု၏ ရဲစခန်းတစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်။ စခန်းထဲသို့ ဒုရဲအုပ်ဝင်လာသည်။ လူတစ်ယောက်ကို ရဲသားများရိုက်စစ်နေသည်ကို တွေ့သည်နှင့် မေးသည်။
“ဟေ့ ဒီလူ့ကို ဘာဖြစ်လို့ရိုက်နေရတာလဲကွ´´
“သူဘယ်မှာနေသလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့မေးတယ်၊ သူကဖြေတယ်၊ သူပြောတဲ့လိပ်စာအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ သွားကြည့်တယ်၊ ရောက်တော့ သူဒီမှာ မနေပါဘူးလို့ လေးအခန်းက လူကပြောတယ်၊ နောက်မလိမ်ရဲအောင် ဆုံးမတာပါ´´
“အေး အေး၊ ဒီလိုဆိုရင် ဆက်ပြီး ဆုံးမလိုက်ကြ´´
ထိုသို့ပြောပြီး ဒုရဲအုပ်ထွက်သွားသည်။ မကြာမီစခန်းသို့ ရဲအုပ်တစ်ယောက်ရောက်လာသည်။ စောစောက ဒုရဲအုပ်ကဲ့သို့ပင် မေးသည်။ ရဲသားများကလည်း စောစောကအတိုင်း ဖြေသည်။
“အေး အေး၊ ဒီလိုဆိုရင် ဆက်ဆုံးမလိုက်ကြ´´ ဟု ပြောပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်။
မကြာမီ ရဲမှူးကြီးရောက်လာသည်။ ယခင်ကအတိုင်းမေးရာ ရဲသားများက ယခင်ကအတိုင်းဖြေသည်။
“ဒီလောက်ဆို တော်လောက်ပါပြီ၊ သူ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်၊ တော်တော်ကြာ အသက်ပါ ထွက်သွားနေဦးမယ်´´
အရိုက်ခံယောက်ျားသည် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များဖြင့် အိမ်သို့ပြန်လာသည်၊ မိမိ၏အခန်းကို သော့ဖွင့်အဝင်တွင် ဘေးခန်းမှ လူထွက်လာပြီး လှမ်းပြောသည်။
“ဟေ့လူ၊ ခင်ဗျားကျုပ်ကို အရက်တိုက်ရမယ်ဗျ´´
“ရဲသားတွေလာပြီးမေးတယ်၊ ခင်ဗျားဒီမှာ နေသလားတဲ့၊ အဲ့ဒါမနေဘူးလို့ ကျုပ်ကဖြေလိုက်တယ်။´´
“ဒီမိုကရေစီရရင် ခိုးတာဝှက်တာ ရှိဦးမလား´´
“ဟင့်အင်း၊ အဲဒီမတိုင်ခင် အဆင့်ထဲက ခိုးလို့ကုန်ပြီ´´
တရားသူကြီးက မီးလောင်မှုဖြစ်ရာတွင် မီးလောင်မှုအား ပထမဆုံးတွေ့သည်ဆိုသော သက်သေကို မေးသည်။
“မောင်မင်း မီးလောင်တာကို ဘယ်အချိန်မှာ စသိတာလဲ´´
“ကျွန်တော် ဒီနေ့ကလဲ အလုပ်ပင်ပန်းတာနဲ့ အိမ်ရောက်ရောက်ခြင်း ထမင်းတောင်မစားဖြစ်ပဲ အိပ်ယာထဲတန်းဝင်တယ်´´
“ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ အိပ်ယာထဲဝင်ပြီး ခဏအကြာမှာ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်မိန်းမငုဝါရဲ့လုံချည်ကိုလှန်လိုက်ပါပါတယ်´´
“မောင်မင်းတရားရုံးမှာ မဆိုင်တာတွေ မပြောပါနဲ့လိုရင်းပြောပါ´´
“ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ၊ ကျွန်တော်လှန်ကြည့်လိုက်တော့ နွေးကနဲအသိနဲ့ အနံ့တစ်ခုကို ခံစားမိပါတယ်´´
“မောင်မင်း ဒီလိုမဆိုင်တာတွေလျှောက်ပြောနေရင် မောင်မင်းကို ဖမ်းချုပ်ရလိမ့်မယ်´´
“ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းပြတင်းပေါက်ကို မချုပ်ရသေးတဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမလုံချည်နဲ့ ကာထားမိတာ အပြစ်လားဗျာ´´